I-GTC ibuyisa inkumbulo endala | IOL Isolezwe
Isolezwe / 14 June 2012, 12:38pm /
IMOTO: Astra GTC
INANI: R304 000
NGESIKHATHI ngiphuma lapho ngicuphe khona ngezikhathi zantambama emasontweni amabili edlule, ngizithele phezu kwe Opel Astra GTC. Le moto bekumele ngiyivivinye izinsukwana ngofefe labakwa Opel. Kimina i-GTC ibuyise izinsuku zakudala ze Opel Boss okuyimoto eyayidlisa ngaleso sikhathi emalokishini. Ngalezo zinsuku ilitha kapetrol lalibiza ngaphansi kukapondo. Insizwa engangijwayelene nayo ihamba nge Boss kodwa esiyawandulela lomhlaba angingabazi ukuthi ngabe ihamba ngayo i-GTC entsha ukube isawadla anhlamvana. Emuva kwe Boss kwa Opel baphindile bagadla ngezimoto ezinamandla ezibizwa ngama OPC njengoba sebewandisile futhi umndeni wabo nge GTC Coupe.
Uzokhumbula ukuthi i-GTC endala yadayisa kuleli phakathi kuka 2006 no 2009. Lena entsha esikhuluma ngayo njengamanje yethulwe ngoMashi emuva kokukhonjiswa embukisweni iFrankfurt Motor Show ngoSepthemba 2011.
Noma i-GTC yakhiwa emzileni ofanayo ne-Astra Hatch enezicabha ezinhlanu, kodwa lezi zimoto zozimbili akukho izingxenye zayo ezihambelanayo.
Le Coupe idle ngokuba yinde, yase iyabhasha uma uyiqhathanisa nalena enezicabha ezinhlanu. Ihlukene ngezinjini, kukhona engu 1.4 litre enamandla afinyelela ku 103kW kanye ne 1.6 litre Sport enamandla afinyelela ku 132kW. Zozimbili lezi zinjini zine turbocharger kanti zisebenzisa upetrol. Bengilindele ukuthi lena enenjini engu 1.6 litre ingene esigabeni sama hot hatch, kodwa lokho akwenzekanga njengoba ikhala ngaphansi ngamandla kuleyo engu 2.0 litre 147kw ebidayisa eminyakeni edlule.
Noma kunjaLO kodwa ngiyayivuma le njini engu 1.6 ngoba iyakwazi ukusuka ku 0 igabavule ifike ku 100km/h ngemizuzwana engu 8.8.
Noma kungeyona imoto ongaze ubeke ngayo imali phansi uma izoncintisana nezinye ngejubane, iyashibilika emgwaqeni.
Engikuqaphelile ukuthi nomuntu ongenaso isipiliyoni sezimoto sokushayela izimoto ezinamandla kodwa uzizwa ekhululekile abuyelwe nawukuzethemba kule GTC.
Idonsa ngamagiya ayisithupha bese kuthi ijubae layo eliphezulu libe ngu 220km/h. Le moto iphuma ne HiPerStrut front suspension okungokokuqala ukuthi bayisebenzise kuma Astra. Ihlala ithule emgwaqeni, okunye okubonakala kuyenza izinze indlela eyakhiwe ngayo yaba ngumtshumo ukuze ikwazi ukuphambana nomoya.
Noma inezicabha ezimbili, kodwa labo abahlala ezihlalweni zangemuva bayakwazi ukungena kalula futhi nesikhala ngemuva siyavuma.
Isikhala sokubeka impahla ngemuva siwububanzi obusuka ku 380 kuya ku 1 165 litres. Izihlalo zangaphambili eziyisikhumba ziyakwazi ukufudunyezwa njengoba kulezi zinsuku amakhaza eshubisa umnkantsha.
Le moto iphuma ne warranty yeminyaka emihlanu emuva kuka 120 000km kanye ne service plan yeminyaka emihlanu emuva kuka 90 000km.